लोकमान गएर के भयो ! | Lifemandu
लोकमान गएर के भयो !
| बुधबार, ४ साउन, २०७४
काठमाडौं, ४ साउन । लोकमान गएर के भयो, उनका आयज/नाजायज कदम एकपछि अर्को गर्दै अनुमोदन हुन थालेपछि ! अन्ततः सम्धी रोहिणी थपलियाले हेलिकोप्टरको काम तमाम गरिभ्याएका छन् ।
प्रज्वलसमशेर प्रधानसेनापति भएकै बेला राजा बिरेन्द्रलाई झुक्याएर अतिविशिष्ट व्याक्तिको उडानका नाममा आरजे हण्ड्रेड नामकक जहाज भिडाउन खोजे उनै रोहिणीले इटालियन अगुस्ता कम्पनीको हेलिकोप्टर नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहने गरी ल्याउने तारतम्य सम्धि लोकमान अख्तियार प्रमखु हुँदैमा मिलाएका थिए ।
सन् २०१५ मै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिने भनेको सानो जहाज अझै आएको छैन । त्यो जहाज पोल्याण्डमा बन्ने हो । जेठ १६ गते बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा पाइलट कर्नेल कैलाश गुरुङको ज्यान जाने गरी दुर्घटनामा परेको कल साइन एनए ०४८ कै जोडा हो त्यो । सेनाको प्रत्यक्ष अंग भएर थुप्रिएका हेलिकोप्टरमध्ये एउटा छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा राखिने भएको छ । अर्को एउटा एभ्रो विमान लिलाममा गएको छ भने एउटा जहाज सैनिक संग्राहलयमा राख्ने तयारी छ ।
इण्डोनेसियन कम्पनीले पनि ५१ सीटे प्लेन नेपाललाई बेच्दैछ । ब्रुनाइ, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड र बर्माले त्यही जहाज चलाइरहेका छन् । प्याराजम्प गर्न मिल्ने त्यसमा नाइटभिजन सुविधा पनि हुनेछ ।
रोहिणी मार्फत खरिद हुँदै गरेको त्यही हेलिकोप्टरको मामिलामा भारतामा वितण्डा मच्चिसकेको छ । अगुस्ता वेस्टल्याण्ड हेलिकोप्टर खरिद प्रकरणमा भारतीय वायुसेनाध्यक्ष शशिन्द्रपाल त्यागीसहित उनका भाई सञ्जिव र वकिल गिरफ्तार भएका छन् । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
काठमाडौं, २६ असार । दोस्रो ठूलो नदी कोसीको सतह खिइँदै गएर सिँचाइ प्रणाली मृतप्रायः भएपछि बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्‍याउन सरकारले कोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने भएको छ ।
बिहानको ६ बज्दानबज्दै कीर्तिपुरबासी धेरैको आँखा आकाशतिर हुन्थे । बच्चाहरु त कौशीमा गएर बेलुन कहाँसम्म पुग्छ भनेर देखिन्जेल हेर्थे ।